अध्यात्म – SamajKhabar.com
बाइबल क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ, कोरान मुस्लिम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ हो । त्यसैगरी, हिन्दु धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ वेद हो । वेद चार वटा छन् ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्थर्ववेद । यी चार वेदको निष्कर्ष उपनिषद् ग्रन्थ हो....पुरा पढ्नुहोस
कहाँ हरायो पशुपतिका ३५० रोपनी जग्गा ?
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति गुठीको स्वामित्वमा रहेका करिब ३५० रोपनी जग्गा फेला पार्न सकेको छैन । सांसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १२ बर्षअघि साढे तीन सय रोपनी जग्गा खोजी गर्न निर्देशन दिए पनि अझै त्यो काम हुन सकेको छैन । साविकको लगतमा देखिए पनि उक्त जग्गा फिल्डमा देखिएको छैन ।, यो....पुरा पढ्नुहोस
दसैंमा किन लगाईन्छ जमरा ? जमराको यस्तो छ फाइदा…
प्रा. डा. सिद्धिवीर कर्माचार्य - आश्विन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु भएर दशमी तिथिमा पूर्ण हुने अथवा दस दिनमा परिपूर्ण हुने एक विशेष सांस्कृतिक पर्व नै दसैँ हो । दसैँको पहिलो दिन पाँगो माटो (Slit) मा जौको जमरा राख्ने चलनबाट दसैँको पहिलो दिन सुरु भएको मानिन्छ । (कसै कसैले जौको सट्टा मकै पनि जमरा राख्ने चलन छ) ।....पुरा पढ्नुहोस
सुरु भयो दसैं, आज घटस्थापना
पुर्णप्रसाद मिश्र, काठमाडौं । यस वर्षको दुर्गा पक्ष तिथि घटबढ नभई १५ दिनकै भएकाले शक्तिको साधनाका लागि राम्रो योग परेको छ । विगत वर्षमा कुनै तिथि घटबढ हुँदा दुर्गा पक्ष १४ दिन वा त्योभन्दा पनि कम हुने गथ्र्यो । यस वर्ष १५ दिनको दशैँ भएकाले देवीको आराधना गर्नका लागि राम्रो अवसर जुटेको नेपाल पञ्चाङ्ग....पुरा पढ्नुहोस
दसैंको टीकाको शुभसाइत – ११ बजेर ५५ मिनेट
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस बर्षको बडादशैंको टीकाको शुभ साइत बिहान ११ बजेर ५५ मिनेट जनाएको छ । बुधबार समितिले साइत सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो । असोज ५ गते बिहीबार आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आरम्भ हुने र त्यस दिन बिहान ९ बजेर ४१ मिनेटमा घटस्थापना गर्न शुभ साइत रहेको समितिका....पुरा पढ्नुहोस
आज हरिशयनी एकादशी, तुलसी रोपेर मनाइँदै
काठमाडौं । आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि भगवान् विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्ने धार्मिक विश्वासमा आज हरिशयनी एकादशी पर्व व्रत, पूजा, पाठ गरी मनाइँदैछ । जेष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात् निर्जला एकादशीका दिन घर घरमा राखिएको तुलसीको दलबाट आजै विरुवा रोपी चार महिनासम्म विधिपूर्वक पूजा पनि सुरु गरिन्छ । कात्र्तिक....पुरा पढ्नुहोस